कुस्मा-ज्ञादी पुल मुनी मोदी किनारमा मृत भेटिएको युगल जोडीको मृत्यु रहस्यमय | ebaglung.com
२०७४ श्रावण १६, सोमबार २२:०५	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार 1736 पटक हेरिएको !
पर्वत २०७४ साउन १६ । आईतवार विहान मोदी खोला किनारमा मृत अवस्थामा फेला परेका सुनसरी धरानका २६ वर्षिय अकिन गुरुङ र ललितपुर ढिलाहिटीकी की २५ वर्षिया मुना रानाको शव उनिहरुका आफन्तले बझेर लगेका छन् । कुस्मा देखी ज्ञादी जोडेन मुलुककै अग्लो पुलबाट शनिवार राति १० बजेको समयमा मोदी खोलामा हाम फाली आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
कुस्मा-ज्ञादी झोलुंगे पुलमा बेबारिसे अवस्थामा झोला रहेको र मोदी खोला किनारमा दुईजनाको शव छ भन्ने जानकारी पाएपछी प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको थियो ।
झोलामा भएको मोबाईलबाट आफन्तहरुसंग कुराकानी गर्दा उनिहरुको पहिचान खुलेको प्रहरी निरीक्षक मधुकर जंग विष्टले जानकारी दिएका थिए । झोलामा ट्«ेकिङका लागि आवश्यक पर्ने बन्दोवस्तीका समान रहेको प्रहरीको भनाई छ । पुलबाट मोदीखोलामा हामफाली आत्महत्या गरेको व्यापक चर्चा गरिएपनि आत्महत्या गर्नुको कारण खुल्न सकेको छैन । उनिहरुले सुसाईट नोट केहि लेखेर छोडेको अवस्था पनि छैन ।
श्रोत भन्छ, उनिहरु शनिवार कुस्मा बजार घुम्न आएका थिए । साँझ पख यो युगल जोडी पुलपारी ज्ञादी गएर त्यहाँको एक होटेलमा बसी चीसो पिएर रमाईलो गफ गरिरहेका थिए । राति १० बजे तिर उनिहरुले त्यहि बास मागेका थिए तर बास बस्ने ठाउँ छैन, यसका लागि पारी कुस्मामा जानु पर्छ भने पछी जोडी कुस्मा जान हिँडेको थियो । तर उनिहरु कुस्मा पुगेनन् । आईतवार विहान उनिहरु मृत अवस्थामा मोदी खोला किनारमा भेट्टिए ।
मर्न कै लागि त अन्य ठाउँहरुपनि थिए, तर यो जोडीले कुस्मा ज्ञादी जोड्ने पुल नै आत्महत्याका निम्ति किन रोज्यो भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने शनिवार साँझ पुल पारी नै बास बस्न खोजेका यिनीहरु कुस्मा तर्न लाग्दा एक्कासी आत्महत्या गर्ने सोँचमा कसरी पुगे ? भन्ने प्रश्न अर्कोतिर छ । मृतक जोडीको शव मोदी खोलाको वीचमा परेको अवस्था छैन, यसकारण यिनीहरुको मृत्युको अन्य कारण हुनसक्ने आशंका उब्जिएको छ । यस बखत पर्वतवासीले यिनै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्दै यस घटनालाई रहस्यमय बताईरहेका छन् ।